Wasaarada Gaadiidku Dadka Dalka Miyey Nacsiinaysa? | WAJAALE NEWS
Wasaarada Gaadiidku Dadka Dalka Miyey Nacsiinaysa?
June 21, 2020 - Written by Editor:
Baabuurka numbarka hore lahaa waa la bedelaya waxa lagugu bedelaya lacag dhan 110 dollar.
Liisankii aad sidatay waa la bedelaya, waxa lagugu bedelaya 80 dollar.
Warshada eegi doona tayada baabuurka oo wali qiimihii la soo saarin oo ah culays kale oo dadkii ku soo kordhaya.
Waa la isku fikiraa
W\_Q:Barkhad-Ladiif M. Cumar